Antenna nọ n'ọrụ 1 ruo 20dB, 1-30 MHz - CZH / Fmuser Fm Transmitter China Supplier China Kpọtụrụ: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
home » Antenna rụrụ ọrụ 1 ruo 20dB, 1-30 MHz
Antenna rụrụ ọrụ 1 ruo 20dB, 1-30 MHz.NkeRodney A. KreuterandTony van Roon
“Mgbe ọghọm ma ọ bụ ndị agbata obi jọgburu onwe gị ga - egbochi gị ịme eriri ogologo ekwentị, ị ga - achọpụta na antenna a nwere nha ga-enye otu, ma ọ bụ nke ka mma. “Antenna Arụ Ọrụ a” dị ọnụ ala iji wuo ya ”ma nweekwa ihe ruru 1 ruo 30Mhz n'etiti uru 14 na 20dB."
Fma ọ bụ ịnabata oge mkpụmkpụ mkpụmkpụ mkpụmkpụ, iwu izugbe bụ “ka ogologo oge antennal ahụ na-enweta ikike mgbaàmà siri ike.” Ọ dị nwute, n'etiti ndị agbata obi ọjọọ, iwu ụlọ mgbochi, na atụmatụ ala na-adịghị oke karịa stampụ akwụkwọ ozi, obere - ka antenna na-abụkarị mkpirikpi waya nke awara awara awara - karịa 130 ụkwụ ogologo nke waya ga-amasị anyị eriri n'etiti ụlọ elu iri ise.
Ọ dabara nke ọma, enwere ụzọ ọzọ adaba adaba iji doti ogologo waya ahụ, nke ahụ bụkwa antenna nọ n'ọrụ; nke b ụ nke d ị na antenna dị mkpụmkpụ na ntxghariri d ị elu. Ngalaba nke m arụ ọrụla nke ọma kemgbe ihe dị ka afọ iri. Ọ na-arụ ọrụ afọ ojuju.
Echiche nke antenna nọ n'ọrụ dị mfe. Ebe ọ bụ na antenna ahụ dị obere, ọ naghị egbochi ume dịka nnukwu antenna, yabụ anyị na-eji ngbanye RF wuru ewu iji mepụta akara ngosi pụtara “mfu” ọzọ. Emere ka ndị nata nnabata rụọ ọrụ iji rụọ ọrụ na 50-ohm.
Enwere ike wuru antennas nọ n'ọrụ ka ọnụọgụ ọ bụla, mana ha na-ejikarị VLF (10KHz ma ọ bụ karịa) ruo ihe dị 30MHz. Ihe kpatara nke a bụ n’ihi na eriju-ume zuru oke maka ihe ngere ndị ahụ na-adịkarị ogologo oge maka oghere dị. N'oge ọ dị elu, ọ dị mfe ịkepụta antenna obere uru dị obere.
Antenna nọ n'ọrụ gosipụtara n'okpuru (Fig 1), na-enye uru 14-20dB na obere ọsọ ikuku na-amali ngwa ngwa na redio-amateur nke 1-30MHz. Dị ka ị tụrụ anya ya, belata obere oge ka uru ahụ bara ụba. Nweta nke 20dB bụ ihe a na-ahụkarị site na 1-18 MHz, na-agbada na 14dB na 30MHz.
N’ihi na antenna dịkarịsịrị mkpụmkpụ karịa 1/4 na-efegharị efegharị na-eweta nnabata dị obere ma na-emeghachi omume nke dabere na ntanetị nke anatala, ọ nweghị mbọ ọ bụla iji dọọ nsogbu antenna ahụ ọ ga - sie ike ma bụrụ ihe ga - akụda mmụọ ka ịgaghị akwụ ụgwọ ihe karịrị afọ iri. nke igbochi. Kama nke a, usoro ntinye (Q1) bụ onye na-eso ụzọ JFET, onye ntinye ya na-eweta ihe ịga nke ọma na-egbochi njigide nke antenna ugboro ọ bụla. Ọ bụ ezie na enwere ike iji ọtụtụ JFET dị iche iche-dị ka MPF102, NTE451, ma ọ bụ 2N4416 – cheta na a na-edobe nzaghachi ọnụ ọgụgụ dị elu site na njirimara nke ihe ngosi JFET.
A na-eji Transistor Q2 mee ihe dị ka onye na - eso ụzọ emitter iji nye nnukwu ibu maka Q1, mana nke ka mkpa, ọ na - enye ihe ọgbaghara dị ala maka ihe ntanetị nke ihe nderter amplifier Q3, nke na - enye niile nke uru njuputa amplifier. Usoro kachasị dị mkpa nke Q3 bụ fT, ngbachapu okpukpu-elu, nke kwesiri idi na 200-400 MHz. A 2N3904, ma ọ bụ 2N2222 na-arụ ọrụ nke ọma maka Q3.
Ihe kachasị mkpa nke usoro ihe eserese Q3 bụ mpịja ikuku gafere R8: Ọ bụrụ na ọdịda ahụ ka ukwuu, uru ahụ ka ukwuu. Agbanyeghị, ngafe na-ebelata ka uru Q3 na-abawanye.
Transistor Q4 na-agbanwe nrụpụta Q3 dịtụ ntakịrị ka ọ bụrụ ihe na-enweghị ike, si otú a na-enye mbanye zuru oke maka ntinye ntinye 50-ohm nnabata.
Ndepụta Akụkụ na ngwa ndị ọzọ:
Q1 = MPF102, JFET. (2N4416, NTE451, ECG451, wdg) Q2, Q3, Q4 = 2N3904, NPN transistor
Ndị na-emegide ya:
Resistors niile bụ 5%, 1/4-watt
Ndị na-ahụ maka njikwa (akara 16V dịkarịa ala):
Akụkụ & Ngwaọrụ dịgasị iche:
B1 = 9-volt batrị Alkaline S1 = SPST on-off ማብrịrị J1 = Jack ka ọ dabara (gị) eriri anata ANT1 = Igwe ụtarị ụtarị ụtarị (eriri igwe), waya, mkpanaka ọla (ihe dịka 12 ") MISC = ihe PCB, ihe mkpuchi, njide batrị, snap batrị 9V, wdg.
Elekere nwere ike ịbụ ihe ọ bụla; ogologo waya, mkpanaka a na-eji ọla kọpa ma ọ bụ na telescopic nke a napụtara na redio ochie. Eriri ngbanwe telescopic maka redio transistor dịkwa site n’aka ọtụtụ ndị na-ere ere elektrọnik na ndị na-eweta ihe.
Amplifier maka ụdị ihe eji eme ihe na-eji bọọdụ e dere ede (lee n'okpuru). Enwere ike ịgbakọta amplifier na bọọdụ mgbaasị wụwasị (vero board), mana n'ihi na enwere ụfọdụ na -eche echiche nke akụkụ akụkụ, anyị na-atụ aro ka ị mepụta bọọdụ sekọndrị e biri ebi (PCB) maka nsonaazụ kacha mma.
E gosipụtara eserese akụkụ ahụ na fig. 2. Mara na agbanyeghị na bataghachi batrị adịghị mma (ala) batara na kọmpụta PC, mmepụta-ja J1 nwere ihe jikọrọ ya na kabetị. A na-eme njikọ dị n’agbata bọọdụ PC na ngalaba ụlọ ọrụ ahụ site na ihe nrịgo ma ọ bụ oghere ndị eji eme ka igbago bọọdụ PC na ebe a na-edebe ihe. Emekwala B NOTP *R subst ọkọlọtọ plasta ma ọ bụ oghere ndị ọzọ n'ihi na ha agaghị enye njikọ ala n'etiti bọọdụ PC, okpuru ulo, na J1. Ọ bụrụ n’ikpebie iji kọfịlo rọba iji dochie ihe nrụpụta, gbaa mbọ hụ na ebugharịla njikọ njikọ ala nke J1 na ntanetị na ntanetị nke PC-board.
Eriri telescopic na-agagharị n'etiti PC. Si n'akụkụ foil nke bọọdụ ahụ, si n'etiti oghere dị na PC pụọ ma dọnye isi nke ihe nkedo ahụ na mpempe ya. Maka mkpuchi na nkwado, anyị na-eji rọba plastik ma ọ bụ rọba dị n'etiti antenna na oghere nke mkpuchi nke kabinet nke eriri ahụ na-agafe. Na mbido, a ga-eji dochie anya teepu rọba dị mma nke na-etinye n'osisi antenna ahụ maka eriri roba.
Ọ bụrụ n’ikpebie ime ndokwa maka antenna waya, wụnye post ụzọ ejikọ 5 ụzọ na kansụl. Mgbe ahụ, dị njikere ijikọ waya dị mkpụmkpụ n'etiti paịlị foil na postu jikọtara ọnụ.
Y’oburu na i nwere mmasi banyere obere okpomoku karia 1-30MHz, enwere ike dochie resistor R1 na eriri LC nke agbagoro n’etiti udiri nke achoro. LC sekit ga –emeziwanye nza nke ihe nrịbama a na-enwerịrị mmasị gị, mana cheta na ọ gaghị eme ka uru nke ihe ngosi ahụ dị.
Y’oburu na mmasi gi kariri oge nke di ala (VLF), enwere ike imezi ihe onodu olu di nkpa site n’ibulite onuzi nke ndi choro C1 na C3. ('Ll gha eme ihe iji mara ihe ha bara.)
Ọ bụ ezie na batrị 9-volt bụ isi iyi a na-atụ aro ya, ihe ngosi ahụ kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma na iji 6-15 volts. A na-egosi ime ụlọ nke ọkwa ahụ okirikiri, na-eji batrị 9-volt dị ka inye ọkụ, egosi na fig 3.
A na-egosi voltaji ọkụ maka ike ọkụ ọkụ 9-volta na eserese schemat fig 1 20. Ọ bụrụ na voltaji dị na ngalaba gị dị iche karịa pasenti 8 na ndị nọ na atụmatụ ahụ, nwaa gbanwee ịgbanwere ụkpụrụ iji wee nweta volta na oke ha. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na voltaji na-agbada R0.3 gafere naanị 4 volt, ị ga-ebelata uru R3 (ọnụ ahịa bara uru dịịrị gị iji chọpụta) iji bulie voltaji ntọala QXNUMX na onye na-anakọta ihe ugbu a.
Naanị voltaji dị egwu bụ ndị gafere R3 na R8. Igosipụta oke kwesiri ịdị mma ma ọ bụrụ na ha dị nso na ụkpụrụ egosi na eserese schemat.
Ebe ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume tụọ voltaji site n'ọnụ ụzọ ruo na isi iyi (VGS) nke FET, ị nwere ike tụọ voltaji dị ugbu a n'ofe R3, n'ihi na ọ bụ otu ihe ahụ ka VGS. Ghazigharị uru R3 kwesịrị ya, ọ bụrụ na voltaji na-anọghị nso nke 0.8-1.2 volts.
A naghị atụ aro iji ihe nrụpụta a dị elu karịa 30 MHz n'ihi uru uru dị na ya. Ọ bụ ezie na arụ ọrụ karịa 30 MHz nwere ike mezue site na iji eriri elegharị anya n'ọnọdụ nke resisis ibu, mgbanwe ahụ karịrị akarị nke ederede a.
Lezie anya mgbe ị na-eji FET (Q1). Nkwenye a na-ekwukarị bụ na FET's bụ ngwaọrụ CMOS enweghị nsogbu mmebi nkịtị mgbe etinyere ya na sekit ma ọ bụ tinye ya na bọọdụ PC. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na a na-echekwa ha nke ọma karịa eletrik eletrik mgbe etinyere na sekit, ha ka nwere ike imebi emebi site na static; yabụ emetụkwala poolu ahụ ụzọ tupu ịtọhapụ onwe gị ka ọ dị site na imetụ ihe ọla ọ bụla emetụrụ.
Nwebisiinka na nzere:
Ebe e si nweta ya: “Akwụkwọ Nlegharị Anya”, 1990. Mbipụta © Rodney A.Kreuter, Tony van Roon, Radio Electronics Magazine, na Gernsback Publications, Inc. 1990. Site n'akwụkwọ ikike. (Mbipụta Gernsback na redio elektrọnik anọghị azụmaahịa). Mkpesa dọkụmentị na ngbanwe, eserese niile, PCB / Ihe ngosi Tony van Roon sere. Ighazigharị ma ọ bụ were eserese n'ụzọ ọ bụla ma ọ bụ n'ụdị nke oru ngo a bụ ihe iwu machibidoro ịhapụ iwu mba ụwa.